Myanmar Idol Season3မှာ ဘယ်ဒိုင်ကို သဘောအကျဆုံးလဲ
11 May 2018 . 2:46 PM
အပတ်စဉ်သောကြာနေ့ညတိုင်း MNTV ကနေလာနေကြဖြစ်တဲ့ Myanmar Idol Season3ကို ဘယ်လိုတွေရိုက်ကူးထားကြတယ်။ တနေရာပြီး တနေရာ ဘယ်လိုမျိုးအသံစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာတွေကို ဒိုင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုရန်အောင်က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ အမှတ်တရလေးတွေအဖြစ် တင်ထားပါတယ်။
Season3အတွက် ဒိုင်လေးယောက်
“ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ Myanmar idol season3အတွက်,မကွေးမြို့နဲ့ပုသိမ်မြို့မှ ဝါသနာရှင်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ အသံစစ်တဲ့ အချိန်က အမှတ်တရများ တင်ပြရန် အနည်းငယ်နောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက် နားလည်ပေးပါလို့ ပြောပါရစေခင်ဗျာ…🙏🏼🙏🏼🙏 ချစ်သူ ခင်သူ မြတ်နိူးသူများကို ထာဝရချစ်တဲ့.. YA ❤❤”ဆိုပြီးတော့ လည်းရေးသားထားပါသေးတယ် ။
အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ကျော်ထက်အောင်နဲ့ ကိုရန်လေး
Myanmar Idol ကို လုပ်ခဲ့တာဆိုရင် Season3ခု အထိရှိခဲ့ပါပြီ။ အခုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Season3မှာတော့ ဒိုင်များအဖြစ် ရန်အောင် ၊ မျိုးကျော့မြိုင်၊ မြန်မာပြည်သိန်းတန် နဲ့ တင်ဇာမော်တို့ပါဝင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Idol အစီအစဉ်တိုင်းမှာ မြို့တွေ အလိုက် အသံစစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးနေကြဖြစ်သလို အဲ့ လိုအသံစစ်ဆေးတိုင်းမှာလည်း တကယ့် ကို ဝါသနာပါပြီး ပါရမီထူးကဲ ကြတဲ့ သူတွေကိုတွေတွေ့ရသလို ဝါသနာပါပေမယ့်လည်းအသံမကောင်းလို့ ဆိုတာတွေတလွဲဖြစ်ပြီး ဟာသ ဗီဒီယိုလေးတွေအဖြစ် Facebook ပေါ်တက်လာတဲ့ အခါ ပရိသတ်က သဘောကျလို့ အားပေးဝန်းရံခံရတဲ့ သူတွေလည်း ရှိလာကြပါတယ်။
ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးရော Myanmar Idol အစီအစဉ် ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား။ဘယ်ဒိုင်ကိုရောသဘောအကျဆုံးပါလဲ။
Season 1 မှာ Winner ဖြစ်ခဲ့သူကလည်း အမျိုးသားအဆိုတော် စောလားထော်ဝါး ဖြစ်သလို Season2မှာ Winner ဖြစ်ခဲ့သူကလည်းအမျိုးသားအဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သားငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ အခုလာမယ့် Season3မှာတော့ ဘယ်သူဟာ Winner ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ကိုစောင့်မျှော်ရင်း Myanmar Idol ပရိသတ်တွေ အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Photo Credit:Yang Aung Facebook
Myanmar Idol Season3မှာ ဘယျဒိုငျကို သဘောအကဆြုံးလဲ
အပတျစဉျသောကွာနညေ့တိုငျး MNTV ကနလောနကွေဖွဈတဲ့ Myanmar Idol Season3ကို ဘယျလိုတှရေိုကျကူးထားကွတယျ။ တနရောပွီး တနရော ဘယျလိုမြိုးအသံစဈဆေးမှုတှလေုပျဆောငျနတေယျဆိုတာတှကေို ဒိုငျတဈဦးဖွဈတဲ့ ကိုရနျအောငျက သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ အမှတျတရလေးတှအေဖွဈ တငျထားပါတယျ။
Season3အတှကျ ဒိုငျလေးယောကျ
“ဒီရကျပိုငျးတှမှော Myanmar idol season3အတှကျ,မကှေးမွို့နဲ့ပုသိမျမွို့မှ ဝါသနာရှငျပွိုငျပှဲဝငျတှရေဲ့ အသံစဈတဲ့ အခြိနျက အမှတျတရမြား တငျပွရနျ အနညျးငယျနောကျကခြဲ့တဲ့အတှကျ နားလညျပေးပါလို့ ပွောပါရစခေငျဗြာ…🙏🏼🙏🏼🙏 ခဈြသူ ခငျသူ မွတျနိူးသူမြားကို ထာဝရခဈြတဲ့.. YA ❤❤”ဆိုပွီးတော့ လညျးရေးသားထားပါသေးတယျ ။
အစီအစဉျတငျဆကျသူ ကြျောထကျအောငျနဲ့ ကိုရနျလေး
Myanmar Idol ကို လုပျခဲ့တာဆိုရငျ Season3ခု အထိရှိခဲ့ပါပွီ။ အခုရောကျရှိနပွေီဖွဈတဲ့ Season3မှာတော့ ဒိုငျမြားအဖွဈ ရနျအောငျ ၊ မြိုးကြော့မွိုငျ၊ မွနျမာပွညျသိနျးတနျ နဲ့ တငျဇာမျောတို့ပါဝငျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ Myanmar Idol အစီအစဉျတိုငျးမှာ မွို့တှေ အလိုကျ အသံစဈဆေးခွငျးကို လုပျဆောငျပေးနကွေဖွဈသလို အဲ့ လိုအသံစဈဆေးတိုငျးမှာလညျး တကယျ့ ကို ဝါသနာပါပွီး ပါရမီထူးကဲ ကွတဲ့ သူတှကေိုတှတှေရေ့သလို ဝါသနာပါပမေယျ့လညျးအသံမကောငျးလို့ ဆိုတာတှတေလှဲဖွဈပွီး ဟာသ ဗီဒီယိုလေးတှအေဖွဈ Facebook ပျေါတကျလာတဲ့ အခါ ပရိသတျက သဘောကလြို့ အားပေးဝနျးရံခံရတဲ့ သူတှလေညျး ရှိလာကွပါတယျ။
ဒီတော့ပရိသတျကွီးရော Myanmar Idol အစီအစဉျ ကို ကွိုကျနှဈသကျပါသလား။ဘယျဒိုငျကိုရောသဘောအကဆြုံးပါလဲ။
Season 1 မှာ Winner ဖွဈခဲ့သူကလညျး အမြိုးသားအဆိုတျော စောလားထျောဝါး ဖွဈသလို Season2မှာ Winner ဖွဈခဲ့သူကလညျးအမြိုးသားအဆိုတျော တဈဦးဖွဈတဲ့ သားငယျဖွဈပါတယျ။ဒီတော့ အခုလာမယျ့ Season3မှာတော့ ဘယျသူဟာ Winner ဖွဈမလဲ ဆိုတာ ကိုစောငျ့မြှျောရငျး Myanmar Idol ပရိသတျတှေ အတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Photo Credit: Yang Aung Facebook